Warshad sodium Gluconate jumlo ah iyo soosaarayaal | Gaoqiang
JS-103 Waxqabadka Sare ee PCE Hooyo Khamri
JS-104 Xarunta PCE ee Khamriga
BT-302 Hoos udhaca sare ee haynta PCE Hooyo Khamri
BT-303 Super Slump oo xafidaya PCE Mother Khamriga
Polycarboxylate Superplasticizer budada
Sibidhka lagu daro
Wakiilka Awooda Hore
Flash Dejinta Admxiture
Wakiilka haynta Biyaha
Polycarboxylate Superplasticizer Monomer oo ku jira qaabka Ether (TPEG-HPEG)
Sodium Gluconate sidoo kale loo yaqaan D-Gluconic Acid, Monosodium Salt waa cusbada sodium ee gluconic acid waxaana soo saara halsano gulukoos. Waa granular cad, crystalline solid / budada ah oo aad ugu milma biyaha.
Sodium Gluconate sidoo kale loo yaqaan D-Gluconic Acid, Monosodium Salt waa cusbada sodium ee gluconic acid waxaana soo saara halsano gulukoos. Waa granular cad, crystalline solid / budada ah oo aad ugu milma biyaha. Ma aha wax daciif ah, oo aan sun ahayn, la nooleyn karo oo la cusboonaysiin karo.Waa iska caabbinta qiiqa iyo hoos u dhaca xitaa heerkulka sare. Hantida ugu weyn ee sodium gluconate waa awooddeeda quudinta ee ugu wanaagsan, gaar ahaan xaddiga alkaline iyo kuwa urursan ee alkaline. Waxay samaysaa shaatiko xasilan oo leh kaalshiyam, bir, naxaas, aluminium iyo macdan culus. Waa wakiilka shaybaarka ka sarreeya EDTA, NTA iyo fosfoonates.
Waxyaabaha & Tilmaamaha
Qaybaha cad / budada cad
Ku lumi qalajinta
1. Warshadaha Cuntada: Sodium gluconate waxay u shaqeysaa sidii xasilooni, isku xigxiga iyo dhumuc weyn markii loo isticmaalo ku darista cuntada.
2. Warshadaha dawooyinka: Dhinaca caafimaadka, waxay ku hayn kartaa dheelitirka aashitada iyo alkali ee jirka bina aadamka, waxayna soo ceshan kartaa hawlgalkii caadiga ahaa ee neerfaha. Waxaa loo isticmaali karaa kahortaga iyo daaweynta cilladda soodhiyamka yar.
3. Waxyaabaha la isku qurxiyo & Waxyaabaha Daryeelka Shakhsiyeed: Sodium gluconate waxaa loo isticmaalaa sidii wakiilka wax dajiya si loo sameeyo dhismooyin leh ion bir ah oo saamayn ku yeelan kara degganaanshaha iyo muuqaalka alaabta la isku qurxiyo. Gluconates-ka waxaa lagu daraa nadiifiyeyaasha iyo shaambooyada si ay u kordhiyaan caarada iyagoo kala gooya ion biyo adag. Gluconates sidoo kale waxaa loo isticmaalaa alaabada daryeelka caafimaadka afka iyo ilkaha sida daawada cadayga halkaas oo loo isticmaalo in lagu kala jaro kalsiyumka waxayna ka caawisaa ka hortagga cirridka.
4. Warshadaha Nadiifinta: Sodium gluconate waxaa si weyn loogu isticmaalaa waxyaabo badan oo guryaha lagu nadiifiyo, sida saxanka, dharka, iwm.
Xidhmada & Kaydinta:
Xirmo:25kg baco balaastig ah oo ay kujiraan shaashadda PP. Xirmo kale ayaa la heli karaa marka la codsado.
Kaydinta:Waqtiga shelf-nolosha waa 2 sano haddii lagu hayo qabow, meel qalalan. Tijaabada waa in la sameeyaa ka dib markuu dhacayo.
Hore: Cellulose Ether HPMC oo loogu talagalay Nadiifinta / La taaban karo / Grout ahaan Wakiil Wakaaladda Biyaha-ilaaliya
Xiga: Polycarboxylate Eter Monomer HPEG / TPEG
Wakiilka Sodium Gluconate Chelating
Nadiifinta Sodium Gluconate La taaban karo
Sodium Gluconate-ka Cuntada
Gluconate-ka Sodium ee Saabuunta
Polycarboxylate Eter Monomer HPEG / TPEG
Shandong Gaoqiang Waxyaabaha Teknolojiyada Cusub ee Co., Ltd.
Ma jiraan wax alaab ah oo aad jeceshahay?
Iyadoo loo eegayo baahiyahaaga, kuu habeyn, oo ku sii alaabooyin aad u qiimo badan.